Iingcebiso ze-4 ze-Instagram zabaThunyeli beLifa-Ubukho bemidiya yoluntu
EtiMnga 07, 2016 by Ukubuyiswa kwe-cormac, Iimbono zizonke:
Ubukho beendaba zosasazo lubalulekile kumthengisi ngamnye wepropathi. Eyona nto kugxilwe kuyo kwiinzame zokuthengisa kufuneka kube kukungena kubabukeli ngokubanzi. Ezi ntsuku, kukho amaqonga eendaba ezentlalo ezinkulu, nangona kunjalo, oku kunokuba nzima ukufumana ukuba zeziphi ezona zisebenza kakuhle kwimizamo yakho yokuthengisa.
Nazi ezinye iingcebiso ezivela Vibbi malunga nendlela yokufumanisa ukuba i-Instagram yeqonga loluntu kwimithombo yeendaba kwishishini lakho kunye nendlela yokuqalisa.
I-Instagram yifoto yokwabelana nevidiyo, eyenza abasebenzisi ukuba bathathe iifoto kunye nevidiyo kwaye babelane ngazo kwi-Twitter, kwi-Facebook nakwi-Instagram.
Bangaphezu kwama-200 ezigidi abasebenzisi abasebenzayo ngenyanga emhlabeni jikelele. Kukho abasebenzisi abazizigidi ezili-14 e-UK. Kukho abasebenzisi abazizigidi ezingama-75 kwi-Instagram mihla le. Kwakhona, zingaphezulu kwezigidi ezingama-20 iifoto ezabiwayo yonke imihla.
Ukuba ujoliso lwakho ngababukeli abancinci, i-Instagram inokuba ilungile kuwe kuba iipesenti ezingama-90 zabasebenzisi ziphantsi kwama-35.
Uyisebenzisa kanjani i-Instagram
Iqonga leendaba ezentlalo lingasetyenziselwa ukwenza ukuba abantu babonakalise uphawu. Ungathumela izinto abantu abafuna ukuzibona. Oku kuyakubatsala, kwaye babone ukuba ungubani, kwaye wenzani.
Izindlu ezintle kunye nezakhiwo
Imifanekiso yeminyhadala / izakhiwo / indawo
Uyilo olwahlukileyo lwangaphakathi
Iimpawu ezinomdla zasekhaya
Iqela lakho kunye neofisi
Nyusa uluhlu lwakho lwePropathi (Ngaphakathi yokumodareyitha)
Akufanele usebenzise I-Instagram kuphela ngenjongo yokuthengisa. Ukuba ufuna ukusebenzisa iqonga lemidiya yoluntu kwintengiso, ke i-Instagram ayisiyiyo eyakho.
Ngamaxesha athile, unokukhuthaza uluhlu lwepropathi. Sebenzisa umgaqo we-5: 1. Sukuzalisa iindaba zakho ngazo zonke iifoto onazo kwipropathi. Endaweni yoko, fumana ifoto efanelekileyo yesakhiwo okanye ukhethe into ephambili oza kuyibonisa. Emva koko unokongeza ikhonkco kumfanekiso ukuze ujonge ngakumbi.
Khumbula, ungasebenzisi i-Instagram kuphela ukudwelisa iipropathi zakho. Uya kuchitha ixesha lakho ngenxa yokuba i-Instagram yakho iya kusilela. Yonke imizamo yakho iya kudaka.
Kuya kufuneka ukuba usebenzise umbono wakho kwi-Instagram. Cinga malunga noko abasebenzisi kwi-Instagram bafuna ukukubona. Thumela imifanekiso efanelekileyo kuwe nakwishishini lakho.
Sukuposa izindlu ezixineneyo. Sebenzisa icala lakho lokuyila kwaye ucinga ngaphandle kwebhokisi. Fumana imifanekiso eza kuzoba ebantwini.
Ukutsala abalandeli, kubalulekile ukuba usebenzise ii-hashtag kwi-Instagram. Le yeqonga lemithombo yeendaba zentlalo apho lisebenzisa ama-hashtag amaninzi ayisiyonto imbi. Kuya kufuneka ujonge ukusebenzisa imveliso kunye nee-hashtag zasekhaya. Oku kuya kuthimba ingqalelo yabasebenzisi abaninzi kwaye kwandise amathuba okuthandwa nezabelo.
Awufuni kuhamba nge-hashtag crazy. Qinisekisa ukuba i-hashtag nganye oyisebenzisayo iyasebenza kwisithuba. Kwiziphumo ezilungileyo sebenzisa ii-hashtag ezi-5 ukuya kwezi-10 kwisithuba ngasinye.
Khumbula, ungasebenzisi i-Instagram kuphela ukudwelisa iipropathi zakho. Uya kuchitha ixesha lakho ngenxa yokuba i-Instagram yakho iya kusilela.
Ukubuyiswa kwe-cormac Disemba 7, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Yenza ukuQhelelwa ngokuQaphela, Iiarhente zezindlu, Uyisebenzisa kanjani i-Instagram, instagram, Uluhlu lwePropathi, Imithombo yeendaba eyiNtloko yeendaba, Nyusa impahla, Nyusa impahla yakho, Uluhlu lwePropati, Ukuthengiswa kwezindlu kunye neendaba zeNtlalo, Intengiso yeNtlalontle yeShishini, Imidiya yokuncokola, intengiso yemithombo yeendaba kwintengiso yearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, Amaqonga eendaba ezentlalo, Iingcebiso zeeAgents zeNdawo, Yintoni i-Instagram?. Bookmark le Permalink.